ဟိုတယ်ဖွင့်ရင်း တဖက်တလမ်းက အပိုဝင်ငွေရှာကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်များ
20 Jun 2018 . 1:16 PM
ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေ၊ အားကစားသမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ကြေးတွေ၊ အားကစားဝင်ငွေတွေကို တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ မြှုပ်နှံထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ Taylor Swift ဆိုရင် အိမ်ခြံမြေတွေ ဝယ်ထားပြီး တချို့အနုပညာရှင်တွေဆိုရင်လည်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုလိုမျိုးမှာ မြှုပ်နှံကြပါတယ်။ ဒီလို မြှုပ်နှံကြတဲ့ အထဲမှာ ဘယ်သူတွေပါသလဲ၊ သူတို့ဖွင့်တဲ့ Hotel တွေကရော Rating ကောင်းလား တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Hugh Jackman : Gwinganna Health Retreat
သဘာဝကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Hugh Jackman ဟာ သြစတြေးလျ Gold Coast မှာရှိတဲ့ Gwinganna Health Retreat မှာ နှစ်လလောက် အနားယူပြီးနောက်မှာတော့ သိပ်သဘောကျသွားတဲ့အတွက် သူဟာ အဲ့ဒီ Resort ကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Resort ဟာ Spa တွေ၊ Outdoor Activities တွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုပြေလျော့စေမယ့် ကုထုံးတွေ အကုန်လုံးရနိုင်တဲ့ သဘာဝတရားနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Take me back!! ☺️ #gwinganna #retreat #wellness #pool #sunny #qld #relaxation #swimming
A post shared by ☆ Cass ☆ (@finding_cass) on Jun 15, 2017 at 11:38pm PDT
Andy Murray : The Cromlix Hotel
အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်လည်း ဖြစ်၊ တင်းနစ်ကြယ်ပွင့်လည်း ဖြစ်တဲ့ Andy Murray ကတော့ စကော့တလန်မှာရှိတဲ့ Cromlix Hotel ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ၁၉ ရာစုနှစ်စတိုင် တောနယ်ဘက် အဆောက်အအုံဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်များကလည်း ဟိုတယ်ဖွင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Andy Murray ပိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ အပျံစား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ဟိုတယ်ကြီး အဖြစ် မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။
How utterly gorgeous is our garden room ready foraprivate event? Picture by @Jenniflowerphotography www.Cromlix.com _____ #Scotland #glasgow #Edinburgh #luxury #hotels #hospitality #hotel #instahotel #cromlix #luxurytravel #luxuryhotel #andymurray
A post shared by Cromlix (@cromlixhotel) on Apr 13, 2017 at 12:59am PDT
Richard Gere : The Bedford Post Inn
နယူးယောက်အရပ်မှာ ရှိတဲ့ Bedford မြို့လေးမှာ ကျေးလက်ဆန်တဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ Bedford Post Inn ဆိုတာလေး ရှိပါတယ်။ ဒီ Inn ကိုတော့ Richard Gere က ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ပြီး Richard Gere ကိုယ်တိုင်က Bedford မြို့လေးရှိရာ Westchester နယ်သားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
The best seat in the house #chefstable . . . . . . . #farmhouse #bedfordpostinn #bedfordny #relaischateaux #countryliving #privatedining #kitchenlife
A post shared by Bedford Post Inn (@bedfordpostinn) on Aug 27, 2017 at 1:26pm PDT
Leonardo Dicaprio : Blackadore Caye
Leonardo Dicaprio တစ်ယောက်ကတော့ အမေရိကတိုက်အလယ်ပိုင်း Belize အရပ်က Blackadore Caye ကျွန်းပေါ်မှာ Eco-friendly Resort ဖွင့်ဖို့ ကြံနေပါတယ်။ ဒီလိုအကြံနဲ့ Environmentalist ဖြစ်တဲ့ Leonardo Dicaprio ဟာ Blackadore Caye ကျွန်းကို ဒေါ်လာ ၁.၇သန်းနဲ့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင် Jeff Gram နဲ့ တူတူ ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
Anglers and conservationists throughout Belize are up in arms about Hollywood actor Leonardo DiCaprio’s proposed eco-resort on Blackadore Caye,asmall island located in the northern past of the country. The project, set inadesignated conservation zone, is located on an island the actor purchased withapartner nearlyadecade ago. Read more on the blog today. #flyfishtheworld #yellowdogflyfishing #fishing #flyfishing #conservation #belize #blackadorecaye
A post shared by YellowDogFlyfishingAdventures (@yellowdogflyfishing) on Feb 10, 2016 at 8:05am PST
Robert De Niro : Multiple Properties
Robert De Niro ကတော့ တကယ့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်လို့ ပြောလို့ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Locanda Verde ဆိုတဲ့ အကောင်းစား အီတလီစားသောက်ဆိုင်နဲ့ Luxury အမျိုးအစား Shibui Spa တွေဟာ Robert Deniro ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နယူးယောက်မြို့က Greenwich Hotel ကို နာမည်ကျော်စေတဲ့အရာတွေပါ။ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ တခြားဟိုတယ်တွေကတော့ Greenwich Hotel လောက် နာမည်မကြီးလှဘဲ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာအရပ်မှာရှိတဲ့ Nobu Hotel ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံးဟိုတယ်ဆိုတဲ့ အထိ နာမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ Robert De Niro ဟာ နာမည်ကြီး စားဖိုမှုး Nobu Matsuhisa နဲ့ အတူ Nobu Hospitality Group ကိုလည်း ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီ Hospitality Group မှာ စားသောက်ဆိုင်ပေါင်း ၃၂ ဆိုင်နဲ့ ဟိုတယ် ၉ ခု ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
Getajob that lets you followapassion but still get out in time to join the ladies who lunch for afternoon drinks ✨😝 . . . #restaurant #restaurantdesign #happyhour #drinks #architecture #newyork #newyorker #hotel #hospitality #tribeca
A post shared by Matt Powell (@matt4newyork) on Sep 12, 2017 at 12:11pm PDT
Michael Douglas & Catherine Zeta Jones : Ariel Sands
Ariel Sands Resort
ဟောလီးဝုဒ်ရဲ့ Power Couple တစ်တွဲဖြစ်တဲ့ Michael Douglas နဲ့ Catherine Zeta Jones တို့ အတွဲကတော့ မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက ဘာမြူဒါအရပ်မှာရှိတဲ့ Ariel Sands Resort ကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ဒီ Resort မှာ ရေကူးကန်၊ Salon ၊ Spa နဲ့ ကမ်းခြေတဝိုက် တစ်ထပ်အိမ်ကလေးတွေနဲ့ သာယာစည်ကားအောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။
Clint Eastwood : Mission Ranch Hotel
မင်းသားကြီးလည်း ဖြစ်၊ ဒါရိုက်တာကြီးလည်း ဖြစ်တဲ့ Clint Eastwood ကတော့ ၁၉ ရာစုနှစ်စတိုင် နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တဲ့ အဆောက်အဦးကို Misson Ranch Hotel ဆိုပြီး ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ ကမ်းခြေမြို့ငယ်သေးသေးလေးဖြစ်တဲ့ Carmel-by-the-Sea မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး မြေဧက ၂၂ ဧက ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ဒီမြေပေါ်မှာ အခန်းပေါင်း ၃၁ ခန်း၊ တင်းနစ်ကွင်း၊ အားကစားခန်းမ၊ ညစာစားဖို့ နေရာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Francis Ford Coppola : Multiple Properties
The Godfather လို ဇာတ်ကားကောင်းတွေ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး Francis Ford Coppola ဟာလည်း စွန့်ဦးစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လိုပါပဲ။ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေထဲမှာ စပျစ်ခြံနှစ်ခြံ၊ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၊ ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတစ်ခုတင်မကဘဲ အပန်းဖြေစခန်း ၅ ခုပါ ပါဝင်ပါသေးတယ်။ Belize အရပ်မှာပဲ Blancaneaux Lodge နဲ့ The Turtle Inn ၊ အီတလီမှာဆိုရင် Palazzo Margherita ၊ ဂွါတီမာလာမှာဆိုရင် La lancha နဲ့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာဆိုရင် Jardin Escondido ဟိုတယ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
Ref : time.com
ဟိုတယျဖှငျ့ရငျး တဖကျတလမျးက အပိုဝငျငှရှောကွတဲ့ ကမ်ဘာကြျောမြား
ကမ်ဘာကြျောအနုပညာရှငျတှေ၊ အားကစားသမားတှဟော သူတို့ရဲ့ သရုပျဆောငျကွေးတှေ၊ အားကစားဝငျငှတှေကေို တခွားလုပျငနျးတဈခုမှာ မွှုပျနှံထားလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဥပမာ Taylor Swift ဆိုရငျ အိမျခွံမွတှေေ ဝယျထားပွီး တခြို့အနုပညာရှငျတှဆေိုရငျလညျး ဟိုတယျလုပျငနျးစုလိုမြိုးမှာ မွှုပျနှံကွပါတယျ။ ဒီလို မွှုပျနှံကွတဲ့ အထဲမှာ ဘယျသူတှပေါသလဲ၊ သူတို့ဖှငျ့တဲ့ Hotel တှကေရော Rating ကောငျးလား တဈခကျြလောကျကွညျ့လိုကျရအောငျ။
သဘာဝကို ခဈြမွတျနိုးတဲ့ Hugh Jackman ဟာ သွစတွေးလြ Gold Coast မှာရှိတဲ့ Gwinganna Health Retreat မှာ နှဈလလောကျ အနားယူပွီးနောကျမှာတော့ သိပျသဘောကသြှားတဲ့အတှကျ သူဟာ အဲ့ဒီ Resort ကို ဝယျယူလိုကျပွီး ပူးတှဲပိုငျဆိုငျသူ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီ Resort ဟာ Spa တှေ၊ Outdoor Activities တှေ၊ စိတျဖိစီးမှုပွလြေော့စမေယျ့ ကုထုံးတှေ အကုနျလုံးရနိုငျတဲ့ သဘာဝတရားနဲ့ နီးစပျတဲ့ အပနျးဖွနေရောတဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အိုလံပဈရှတေံဆိပျဆုရှငျလညျး ဖွဈ၊ တငျးနဈကွယျပှငျ့လညျး ဖွဈတဲ့ Andy Murray ကတော့ စကော့တလနျမှာရှိတဲ့ Cromlix Hotel ကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ ၁၉ ရာစုနှဈစတိုငျ တောနယျဘကျ အဆောကျအအုံဒီဇိုငျးဖွဈပွီး ၁၉၈၀ ခုနှဈမြားကလညျး ဟိုတယျဖှငျ့ခဲ့ပါသေးတယျ။ Andy Murray ပိုငျဆိုငျပွီးတဲ့ နောကျမှာတော့ အပြံစား ပွနျလညျပွငျဆငျခဲ့ပွီး ကွယျငါးပှငျ့အဆငျ့ဟိုတယျကွီး အဖွဈ မွှငျ့တငျခဲ့ပါတယျ။
နယူးယောကျအရပျမှာ ရှိတဲ့ Bedford မွို့လေးမှာ ကြေးလကျဆနျတဲ့ အငှအေ့သကျတှနေဲ့ Bedford Post Inn ဆိုတာလေး ရှိပါတယျ။ ဒီ Inn ကိုတော့ Richard Gere က ပူးတှဲပိုငျဆိုငျပွီး Richard Gere ကိုယျတိုငျက Bedford မွို့လေးရှိရာ Westchester နယျသားတဈဦးဖွဈပါတယျ။
Leonardo Dicaprio တဈယောကျကတော့ အမရေိကတိုကျအလယျပိုငျး Belize အရပျက Blackadore Caye ကြှနျးပျေါမှာ Eco-friendly Resort ဖှငျ့ဖို့ ကွံနပေါတယျ။ ဒီလိုအကွံနဲ့ Environmentalist ဖွဈတဲ့ Leonardo Dicaprio ဟာ Blackadore Caye ကြှနျးကို ဒျေါလာ ၁.၇သနျးနဲ့ ဟိုတယျလုပျငနျးရှငျ Jeff Gram နဲ့ တူတူ ဝယျယူခဲ့ပါတယျ။
Robert De Niro ကတော့ တကယျ့ဟိုတယျလုပျငနျးရှငျလို့ ပွောလို့ရနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ Locanda Verde ဆိုတဲ့ အကောငျးစား အီတလီစားသောကျဆိုငျနဲ့ Luxury အမြိုးအစား Shibui Spa တှဟော Robert Deniro ပိုငျဆိုငျတဲ့ နယူးယောကျမွို့က Greenwich Hotel ကို နာမညျကြျောစတေဲ့အရာတှပေါ။ သူပိုငျဆိုငျတဲ့ တခွားဟိုတယျတှကေတော့ Greenwich Hotel လောကျ နာမညျမကွီးလှဘဲ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ၊ မနီလာအရပျမှာရှိတဲ့ Nobu Hotel ဆိုရငျ ကမ်ဘာ့အဆိုးဆုံးဟိုတယျဆိုတဲ့ အထိ နာမညျတှငျခဲ့ပါတယျ။ Robert De Niro ဟာ နာမညျကွီး စားဖိုမှုး Nobu Matsuhisa နဲ့ အတူ Nobu Hospitality Group ကိုလညျး ပူးတှဲတညျထောငျခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒီ Hospitality Group မှာ စားသောကျဆိုငျပေါငျး ၃၂ ဆိုငျနဲ့ ဟိုတယျ ၉ ခု ပါဝငျဖှဲ့စညျးထားပါတယျ။
ဟောလီးဝုဒျရဲ့ Power Couple တဈတှဲဖွဈတဲ့ Michael Douglas နဲ့ Catherine Zeta Jones တို့ အတှဲကတော့ မွောကျအတ်တလန်တိတျသမုဒ်ဒရာထဲက ဘာမွူဒါအရပျမှာရှိတဲ့ Ariel Sands Resort ကို ပူးတှဲပိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ။ ဒီ Resort မှာ ရကေူးကနျ၊ Salon ၊ Spa နဲ့ ကမျးခွတေဝိုကျ တဈထပျအိမျကလေးတှနေဲ့ သာယာစညျကားအောငျ ဖနျတီးထားပါတယျ။
မငျးသားကွီးလညျး ဖွဈ၊ ဒါရိုကျတာကွီးလညျး ဖွဈတဲ့ Clint Eastwood ကတော့ ၁၉ ရာစုနှဈစတိုငျ နို့နဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျး ထုတျလုပျတဲ့ အဆောကျအဦးကို Misson Ranch Hotel ဆိုပွီး ပွောငျးလဲ ဖှငျ့လှဈခဲ့တာပါ။ ကယျလီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ ကမျးခွမွေို့ငယျသေးသေးလေးဖွဈတဲ့ Carmel-by-the-Sea မှာ ဖှငျ့လှဈထားတာ ဖွဈပွီး မွဧေက ၂၂ ဧက ကယျြဝနျးပါတယျ။ ဒီမွပေျေါမှာ အခနျးပေါငျး ၃၁ ခနျး၊ တငျးနဈကှငျး၊ အားကစားခနျးမ၊ ညစာစားဖို့ နရောတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။
The Godfather လို ဇာတျကားကောငျးတှေ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ နာမညျကွီး Francis Ford Coppola ဟာလညျး စှနျ့ဦးစီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျတဈယောကျလိုပါပဲ။ သူပိုငျဆိုငျတဲ့ အရာတှထေဲမှာ စပဈြခွံနှဈခွံ၊ စားသောကျဆိုငျတဈဆိုငျ၊ ရုပျရှငျစတူဒီယိုတဈခုတငျမကဘဲ အပနျးဖွစေခနျး ၅ ခုပါ ပါဝငျပါသေးတယျ။ Belize အရပျမှာပဲ Blancaneaux Lodge နဲ့ The Turtle Inn ၊ အီတလီမှာဆိုရငျ Palazzo Margherita ၊ ဂှါတီမာလာမှာဆိုရငျ La lancha နဲ့ အာဂငျြတီးနားနိုငျငံမှာဆိုရငျ Jardin Escondido ဟိုတယျတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။